Ithetha ntoni ubucwebe beplatinam eKhambodiya? -Uhlalutyo lwenzululwazi
Ngokwento esiyiqapheleyo kufundo lwethu, akukho zincinci zeplatinam eCambodia. Abantu baseCambodian basebenzise kakubi igama elithi "Platinum" okanye "Platine" ukuchaza ingxubevange yentsimbi enepesenti ethile yegolide.
Sathenga ubucwebe beplatinam kwizixeko ezahlukeneyo kunye neentlobo ngeentlobo zeivenkile ezichonge ngokuchanekileyo ukuba yintoni le ntsimbi. Simamele nomthengisi ngamnye ukuba aqonde iinkcazo zabo, kwaye nazi iziphumo esizifumeneyo.
Amanani esibonelela ngawo asisiqhelo kwaye ulwazi luchanekile ngakumbi. Nangona kunjalo, iziphumo zophando lwethu azihambelani kuzo zonke iziphumo zabo bonke ubucwebe, kunokubakho okungafaniyo.
Yintoni iplatinam yokwenene?
Iplatinam emi (inani 3)
Inombolo yePlatinamu 5 kunye 7
Ukuxhamla kunye nokungalunganga kwabacwecwe ubucwebe
Inzuzo kunye nezinto ezingeloncedo kubathengi
Iplatinam yinyani eqaqambileyo, elu ductile, kunye nethambile, isilivere-emhlophe. Iplatinam inzulu kakhulu kunegolide, isilivere okanye ubhedu, ngenxa yoko yeyona ductile ityebileyo enyulu, kodwa ayilulanga kunegolide.
Iplatinam yinto yechemicals enophawu lwe-Pt kunye nenombolo yeatom 78.
Kude kube ngoku, asikaze sifumane ubucwebe beplatinamu kuyo nayiphi na ivenkile ethengisa amatye eCambodia. Kodwa oko akuthethi ukuba akunakwenzeka ukufumana
Abantu baseCambodia basebenzisa igama elithi "Meas" kuphela xa bethetha ngegolide esulungekileyo. Kodwa igolide esulungekileyo ithambile kakhulu kwizicelo zobucwebe.
Ukuba igugu lenziwe ngengxubevange yegolide kunye nezinye izinyithi, ayithathwa njenge- "Meas", kodwa njenge- "platinum".
Akukho mntu uyazi imvelaphi yokwenyani yokusetyenziswa kwegama elithi "Platine", kodwa sicinga ukuba lisuselwa kwigama lesiFrentshi elithi "Plaqué" okanye igama lesiNgesi "Plated", elithetha ukuba ubucwebe eCambodia bugqunywe ngentsimbi exabisekileyo. , Ngelixa kukho isinyithi esinexabiso eliphantsi ngaphakathi. Sicinga ukuba intsingiselo yayitshintshe ngokuhamba kwexesha.
Ngokwenyani, ii-cambodians zisebenzisa igama lesiFrentshi "iChromé" xa bethetha ngobucwebe.
Ukumamela abathengisi iinkcazo, iplatinam esemgangathweni yenombolo ye-planethi 3. Oko kufanele ukuba kuthetha i-3 / 10 yegolide, okanye i-30% yegolide, okanye i-300 / 1000 yegolide.
Ngapha koko, zonke iimvavanyo zethu zibangele ukuba ngaphantsi kwe-30% igolide kwezi zixhobo, njengoko ubona apha ngezantsi, umyinge uyi-25.73%. Oku kungahluka ngepesenti ezimbalwa phakathi kweivenkile ezahlukeneyo, kwaye amaxesha amaninzi iipesenti ziyahlukahluka kubucwebe kwisitolo esinye.
Kuvavanywa ngu: Amandla okusasaza iX-Ray Fluorescence (EDXRF)
Ukuba sithelekisa la manani kwimigangatho yamanye amazwe, oko kuthetha ukuba yigolide ye-6K okanye i-250 / 1000 yegolide.
Lo mgangatho wesinyithi awukho kwamanye amazwe, kuba ubuncinci begolide esetyenziswe imigangatho yamazwe yi-37.5% okanye i-9K okanye i-375 / 1000.
Ukumamela abathengisi iinkcazo:
Inani leplatinamu i-5 emele ukuba ichaze i-5 / 10 yegolide, okanye i-50%, okanye i-500 / 1000.
Inani leplatinamu i-7 emele ukuba ichaze i-7 / 10 yegolide, okanye i-70%, okanye i-700 / 1000.
Kodwa umphumo wahlukile
Kwinombolo ye-5, iziphumo zingaphantsi kunokuba kufanele ukuba zibekhona, kodwa zamkelekile, nangona kunjalo, umahluko ucacile ngenani le-7.
Ipesenti yegolide iyafana phakathi kwenombolo 5 kunye ne-7, kodwa umbala wesinyithi wahlukile. Ewe, ngokutshintsha ubuninzi bobhedu, isilivere kunye ne-zinc, umbala wotshintsho lwentsimbi.
Ibango liphantsi ngenani leplatinamu i-5 kunye ne-7. Ubucwebe abunakuthengiswa njengemveliso emiselweyo eCambodia. Eyona nto ifuneka rhoqo uku-odola ukwenzela ukuba ii-jeellers ziyile ijelile ngakumbi kumthengi.
Inani leplatinamu i-10 yegolide ecocekileyo, kuba ifanele ukuba yi-10 / 10 yegolide, okanye i-100% yegolide, okanye i-1000 / 1000 yegolide.
Kodwa, inombolo yeplatinum ayi-10 ayikho, kuba kuloo meko, igolide esulungekileyo ibizwa ngokuba yi "Meas".
I-Cambodia vs imigangatho yamazwe
Xa kuthelekiswa nemigangatho yamazwe aphesheya, iplatinam yaseCambodiya ithelekiswa negolide ebomvu. Ialloy iqulathe inani elikhulu lobhedu. Ikwayindlela ebiza kakhulu yokwenza igolide, kuba ubhedu luxabiso eliphantsi kunezinye izinyithi ezisetyenziswa kwiialloys zegolide.
Igolide etyheli esemgangathweni wamazwe aqulathe ubhedu oluncinci kodwa isilivere eninzi kunegolide ebomvu.
Igolide yeRose ngummeli phakathi kwegolide etyheli kunye negolide ebomvu, ke iqulethe ngakumbi ubhedu kunegolide etyheli, kodwa ubhedu oluncinci kunegolide ebomvu.
Olu lwazi lulandelayo lungahluka ukusuka kwenye ukuya kwenye ivenkile.
Kubonakala ngathi abanye ubucwebe baseCambodian bayazi ukuba ialloys zabo zikumgangatho ombi kwaye kukho nemigangatho yamanye amazwe.
Sivile nge "Meas Barang", "Meas Italy", "Platine 18" ..
Onke la magama anokuba neentsingiselo ezahlukeneyo. Kwaye abathengisi ngamnye unenkcazo eyahlukileyo.
"Meas Barang" kuthetha igolide yelinye ilizwe
"Meas Italy" kuthetha igolide lase-Italiya
“IPlatine 18” ithetha igolide eyi-18K
Kodwa kwinto esiyivileyo, la magama ngamanye amaxesha achaza umgangatho wesinyithi, ngamanye amaxesha umgangatho wobucwebe bomsebenzi. Ngokubhekisele kwinombolo yeplatinam eyi-18, ayenzi ngqondo xa kuthelekiswa namanye amanani kuba oko kuya kuthetha ukuba iyi-180% yegolide esulungekileyo.
Ukuthengisa ubucwebe beplatinam
Inkqubo yokubhankisha intsha eKhambodiya. Abantu baseCambodiya ngokwesiko batyale imali yabo kwizindlu nomhlaba kutyalo mali lwexesha elide. Kwaye bathenga ubucwebe njengexesha elifutshane okanye eliphakathi ukunqanda ukuchitha imali yabo ngokungeyomfuneko.
Ewe, uninzi lwabantu alunalo uhlahlo-lwabiwo mali lokugcina imali kuyo nantoni na, kodwa kwakamsinya nje ukuba banemali encinci egciniweyo, bathenga iplatinamu, isacholo somqala okanye iringi.
Ngokwesiqhelo, ntsapho nganye ihamba kwivenkile enye kuba iyamthemba umniniyo.
Uninzi lwabantu aluyiqondi into abayithengayo kodwa abayikhathalelanga kuba lolona lwazi mabini bafuna ukulufumana zezi:
Yimalini ubucwebe obuya kuyithenga ubucwebe xa ubuyokufuna imali?
Ngokomndilili, ubucwebe buyithenga ubucwebe beplatinam esemgangathweni malunga ne85% yexabiso labo lwantlandlolo. Oku kunokuhluka ngevenkile
Umthengi kufuneka abuyise ubucwebe nge-invoice ukuze ahlawulwe kwangoko ngemali.
Utyalomali olulungileyo. Kulula ukufumana amatyeli aliqela kwinto enye
Abathengi banyanisekile kuba abakwazi ukuthengisa ubucwebe babo kwenye ivenkile eKhambodiya
Ufuna imali eninzi ezandleni zakho ukuthenga kwakhona iigugu zabathengi. Kuyingozi kwaye kunokutsala amasela. Ngokukodwa ngaphambi kweeholide, xa bonke abathengi beza ngaxeshanye kuba bafuna imali yokuya kwiphondo labo.
Umsebenzi onzima kunye nemihla ngemihla kuba umphathi kufuneka aphathe ivenkile yedwa. Akukho basebenzi bawufaneleyo lo msebenzi
Kulula ukufumana imali
Akudingeki ukuba ube yingcali
Ulahlekelwa yimali xa uyithengisa uyibuyile
Ukuba ulahlekelwa yi-invoice, uphulukana nayo yonke into
Awunakuthengisa ngokubuyela kwenye ivenkile
Yonke into ihamba kakuhle okoko ivenkile ivulekile. Kodwa ukuba ivenkile ivaliwe, kuza kwenzeka ntoni emva koko?
Ungayithenga phi iplatinam yeKhmer?
Uya kuyifumana kuyo yonke indawo, nakweyiphi na intengiso nakwesiphi na isixeko kubukumkani baseCambodia.
Ngaba siyayithengisa iplatinam yeKhmer?
Sithengisa kuphela amatye anqabileyo endalo kunye neentsimbi ezixabisekileyo eziqinisekiswe kwimigangatho yamazwe.
Sikwabonelela ukuyila nokwenza ubucwebe bakho besiko kuyo nayiphi na intsimbi exabisekileyo, kwaye nangawuphi na umgangatho, kubandakanya nePlatinam yangempela.
Sinethemba lokuba isifundo sethu sibe luncedo kuwe.
Sijonge ukuhlangana nani kwivenkile yethu kungekudala.